ဘိုးရင်း ၇၃၇ ဂျက်လေယာဉ် တချို့တွင် မှားယွင်းသော ပစ္စည်းများဖြင့် တပ်ဆင်ထားကြောင်း အမေရိကန်?? - Yangon Media Group
ဝါရှင်တန်၊ ဇွန် ၃
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လေကြောင်းပျံသန်းရေးအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ (FAA) က မြေပြင်၌ရပ်ထားရသည့် ဘိုးရင်း 737 MAX လေယာဉ်များ၏ ပြဿနာအသစ်တစ်ရပ်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ကြောင်း ဆင်ဟွာသတင်းက ဇွန် ၃ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘိုးရင်းကုမ္ပဏီက FAA အား အကြောင်းကြားပြောကြားခဲ့သည်မှာ 737 NG နှင့် 737 MAX လေယာဉ် များတွင် တပ်ဆင်ထားသော လျှပ်စစ်စီးတုတ်ချောင်းမှာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီတပ်ဆင်ထားခြင်းမဟုတ် ကြောင်း၊ ခံနိုင်ရည်နှင့် ကြံ့ခိုင်ရည်မရှိကြောင်း FAA ၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြလိုက်သည်။
ဘိုးရင်းကုမ္ပဏီနှင့် FAA အုပ်ချုပ်မှုရုံးတို့ပူးတွဲစစ်ဆေးခဲ့ရာ ဘိုးရင်း၏ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းခွဲက လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်း ၁၄၈ မျိုးကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ရာတွင် အရည်အသွေး မမီကြောင်း မိမိတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ဟု FAA ၏ ကြေညာချက်က ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘိုးရင်းကုမ္ပဏီကပြောကြားရာတွင် အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းများကို ဘိုးရင်း 737 NG နှင့် ဘိုးရင်း 737 MAX လေယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်ခဲ့သည့်မှတ်တမ်းများကို တွေ့ရှိရသည်ဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါ သံသယရှိသောပစ္စည်းမှာ အချိန်ကာလမရောက်မီ ပျက်စီးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုမမှန်ကန်၍ ပျက်စီးသွားလည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း FAA က ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့သည်။
FAA က ပြောကြားရာတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး 737 MAX လေယာဉ် ၁၇၉ စင်းနှင့် 737 NG လေယာဉ် ၁၃၃ စင်းတို့မှာ အထက် ဖော်ပြပါပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါပစ္စည်း ကြောင့် လေယာဉ်ပျက်ခြင်းမဟုတ် သော်လည်း ထိုပစ္စည်းချွတ်ယွင်း၍ အနာဂတ်တွင်လေယာဉ်များပျက်ကျမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း အဆိုပါ ကြေညာချက်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ FAA က ဘိုးရင်းအား အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းများကို ၎င်းင်း၏လေယာဉ်များမှ ဖြုတ်လဲရန်အမိန့်ပေး ထားခဲ့ကြောင်း၊ လေယာဉ်ပိုင်ရှင်များကလည်း ဤပစ္စည်းများကို ၁ဝ ရက်တွင်း အပြီးလဲလှယ်ရာတွင် ပါဝင်ကြရန် တိုက်တွန်းထားခဲ့သည်။ ဘိုးရင်း၏ 737 MAX လေယာဉ်များလုံခြုံစိတ်ချစေရန် ဘိုး ရိန်းကုမ္ပဏီအား ဖိအားပေးလျက် ရှိသည်။
နေရေးခက်ခဲနေသူများကို ခြောက်လအတွင်း နေရာဖန်တီးပေးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသြ??
၂ဝ၁၉ - ၂ဝပညာသင်နှစ် အခြေခံပညာကျောင်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်
အောင်လံမြို့ပေါ်တွင် ညအခါ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လုယက်မှုဖြစ်ပွားနေပြီး တရားခံများ မမိသေးသောကြောင့်
မတူညီသော အမြင်များကြောင့် စီရော်နယ်ဒိုနှင့် အသင်းခေါင်းဆောင် ရာမို့စ်တို့ကြား တင်းမာမှုမျ?
လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၌ သုံးစွဲရန်အညွှန်းနှင့် ထုတ်ကုန်အချက်အလက်များ မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖော်ပြ
ပရီးမီးယားလိဂ်တွင် ဝီလ်ရှိုင်းယား ကစားခွင့် ရလာမည်ဟု နည်းပြ အာစင်ဝင်းဂါး ကတိပေး
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု အိန္ဒိယ ဆက်လက်ကူညီမည်
စာရေးဆရာမ ဂျူး၏ ‘ကြာတော့သည်လည်း မောင့်စကား’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရုံတင်ပြသ